6 Ndụmọdụ SEO na-agbanwe egwuregwu: Olee otú azụmahịa ndị a si zụlite okporo ụzọ Organic ka ndị ọbịa 20,000+ kwa ọnwa | Martech Zone
N'ime ụwa nke njikarịcha search engine (SEO), naanị ndị nwere ihe ịga nke ọma n'ezie nwere ike ime ka a ghọta ihe ọ na-ewe iji tolite weebụsaịtị gị ruo iri puku kwuru iri puku ndị ọbịa kwa ọnwa. Nke a akaebe nke echiche bụ ihe akaebe kachasị ike nke ika ika nwere ike itinye atụmatụ dị irè ma mepụta ọdịnaya pụrụ iche nke ga-edobere.
Site na ọtụtụ ndị ọkachamara SEO na-ekwupụta onwe ha, anyị chọrọ ịchịkọta ndepụta nke atụmatụ kachasị ike sitere na naanị ndị jisiri ike na-eto ụdị ha ma nata ihe karịrị 20,000 nleta kwa ọnwa. Anyị nwere mmasị na nzuzo nzuzo nke ukwuu okporo ụzọ organic, elu visibiliti, na ahụkebe àgwà webụsaịtị.
N'okpuru ebe a, anyị na-agụnye ndụmọdụ SEO kacha elu 6 na-agbanwe egwuregwu sitere na ụdị ndị jisiri ike wuo weebụsaịtị ndị na-ewu ewu na-enweta opekempe nke 20,000 nleta kwa ọnwa:
Mepụta akụkọ site na iji data nkeonwe:
Otu n'ime nnukwu ndị na-agbanwe egwuregwu anyị bụ iji data nkeonwe bipụta akụkọ nke anyị mechara kesara ndị nta akụkọ. Anyị ahụla ka ọtụtụ webụsaịtị na-eji data dị n'ihu ọha ewepụta akụkọ wee kesaa ndị nta akụkọ. Otú ọ dị, anyị na-eche na data nwe ụlọ bara uru ọbụna karị na ọ ga-emepụta mmasị karị. Nke a bụ n'ihi na ụdị ọnụ ọgụgụ gọọmentị dị onye ọ bụla, na mgbe mgbe, ndị nta akụkọ na-ahọrọ ịhota data nwe ya na nghọta pụrụ iche karịa akụkọ izugbe.
Akụkọ ndị na-emekọ ihe ọnụ na ndị isi ụlọ ọrụ:
Mgbe mbụ anyị malitere, anyị gakwuuru ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ nwere atụmatụ mmekorita maka ndị na-ede akwụkwọ ma ọ bụ mee ajụjụ ọnụ maka ụfọdụ akwụkwọ mgbasa ozi kacha mma, blọọgụ, na saịtị ndị ọzọ dị elu. Anyị maara na ọtụtụ n'ime ha nwere ihe ọmụma pụrụ iche na nghọta nke otu ụlọ ọrụ nke ọtụtụ akwụkwọ ga-eji kpọrọ ihe. Ya mere, ọtụtụ n'ime ha kwenyere na ụdị mmekorita a ka ha na-enwetakwu visibiliti na PR.
Anyị lekwasịrị anya ndị isi dị ka ndị na-eme ihe ike, ndị na-ede blọgụ, ndị ode akwụkwọ, ndị egwu egwu, na ọbụna ndị nta akụkọ chọrọ ịkwalite azụmahịa ha. Ọtụtụ ndị ndezi webụsaịtị wụliri elu na ohere ịnweta ọdịnaya pụrụ iche. Ọ bụ ọnọdụ mmeri.
Nye saịtị ndị nwere aha dị elu ọdịnaya pụrụiche:
Ọ dịghị ihe na-akụda akụkụ ọdịnaya edepụta nke ọma site n'aka onye nyocha ụlọ ọrụ. Ọ dịghị mgbe anyị tụrụ egwu itinye n'ọrụ na naanị idepụta akụkọ maka weebụsaịtị kachasị ikike na ụlọ ọrụ anyị. Isi ihe bụ ilekwasị anya na ịmara ndị editọ n'ezie na ịghọta ihe ha na-achọ. Ọ bụrụ na ị mepụta ụdị ọdịnaya nke dabara adaba maka ndị na-agụ ha, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha ga-ebipụta ya mgbe niile. Ndụmọdụ agbakwunyere bụ ịdị mma mgbe niile, dị ngwa ịzaghachi, ma gosi onye nchịkọta akụkọ na ị na-eme nke ọma karịa oke.
Sara Routhier, onye isi ọdịnaya, quote (Ụlọ ọrụ nne na nna nke Nchekwa akpaaka)
Malite na ụlọ ọrụ niche:
Anyị chọrọ ikwu okwu ụlọ ọrụ niche ma mee ya n'ụzọ na-enye aka na nkwenye. Anyị nọ na ngalaba ọrụ teknụzụ na igwe ojii, anyị lekwasịrị anya naanị n'iwulite aha ọma n'ime ụlọ ọrụ anyị.
Ọ dịghị mgbe anyị nwere mmasị ịbụ ihe nile nye mmadụ nile. Kama, ebumnuche anyị bụ isi bụ iru ndị na-anụ ọkụ n'obi ụlọ ọrụ bụ ndị na-ekerịta mmasị anyị ma ghọta nka anyị. N'uche anyị, ahịa kachasị mma bụ ụdị ahịa nke ọnụ ahịa, na òkè niile ọzọ anyị nwetara n'aka ndị na-agụ akwụkwọ anyị bụ ihe mgbakwunye.
Adnan Raja, Onye isi oche nke Marketing, atlantic.net
Jiri eserese pụrụ iche:
Anyị bu n'obi ikwusa echiche ndị siri ike nghọta site na iji eserese dị mfe na ihe onyonyo. Anyị wepụtara eserese ndị a nye onye ndezi ọ bụla chọrọ imeziwanye ọdịnaya ha. Na mgbanwe, anyị rịọrọ ka ha nye naanị kredit. Anyị wepụtara oge iji chepụta eserese na vidiyo ndị ọkachamara haziri maka ndị mmekọ mmekọ anyị zuru ụwa ọnụ iji nyere ha aka ịga nke ọma na mkpọsa SEO ha.
Maxime Bergeron, onye isi netwọk, CrakRevenue
Azụmahịa na netwọk:
Anyị na ndị editọ kwalite mmekọrịta anyị iji nye ndị azụmaahịa ndị ọzọ ohere ịmekọrịta ndị na-ede akwụkwọ ma ọ bụ mgbasa ozi azụmaahịa n'akwụkwọ ndị ọzọ kachasị elu. Anyị tinyere ego n'ịmepụta netwọk nke azụmahịa na ndị nta akụkọ, wee jiri ndị nwe azụmahịa ndị ọzọ na-azụ ahịa ohere. Isi ihe dị ebe a bụ ịnọrọ n'ezie n'ime ụlọ ọrụ ụfọdụ yana idobe ụkpụrụ dị elu. Ịzụ ahịa na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ejiri azụmahịa ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ dị elu mee ya. Enweghị ngwa ngwa-ndozi. Ọ bụ ihe niile gbasara ịmepụta merie-emeri ọnọdụ.
Janice Wald, CEO, Ịde blọgụ nke ukwuu
Enweghị ụzọ mkpirisi iji wuo ụdị pụrụiche nwere okporo ụzọ organic dị elu. Ọ na-ewe oge, atụmatụ, na iche echiche n'èzí. Site n'ilekwasị anya na ọdịnaya dị ukwuu, mmekorita atụmatụ, eserese, na ajụjụ ọnụ ndị ikike, ụdị nwere ike inye aka chepụta usoro zuru oke maka ogo na ịnweta iri puku kwuru iri puku ndị ọbịa kwa ọnwa. Site n'ịgbaso ụfọdụ ndụmọdụ dị n'elu, ụlọ ọrụ nwere ike ịmalite ime mgbanwe na-agbanwe agbanwe nke ga-eme ka oge na-agbanwe akara ha, okporo ụzọ na ego ha nwetara.
Tags: adnan rajaAmra & ElmaAmra Beganovichmkpuchi autoinsurancebacklinkOgbe24onye na-ede akwụkwọcontent Marketingọdịnaya pụrụ ichendịnaakwa ahajanice waldMichal Sadowskina-akacha blọgụnetworkụlọ ọrụ nichequoteSara routhiersearch engine njikarịchaAahia ọdịnaya